Wararkii ugu dambeeyay xaaladda Gaalkacyo kadib heshiiskii xabad joojinta ahayd ee shalay la gaaray – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay xaaladda Gaalkacyo kadib heshiiskii xabad joojinta ahayd ee shalay la gaaray
Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in xaaladda magaaladaasi ay saakay tahay mid aad u degan, halkaas oo maalmihii ugu dambeysay ay ku dagaalameen ciidamada maamulada Galmudug iyo Puntland.
Dadweynaha ku nool magaalada Gaalkacyo ayaa saakay aad u hadal haaya heshiiska xabad joojinta ahaa ee maalintii shalay qadka teleefanka ku dhexmaray madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Puntland.
Dhaq-dhaqaaqa ganacsi iyo isku socodka gaadiidka ee ka jiray magaalada Gaalkacyo ayaa maanta u muuqda mid si caadi ah kusoo noqonaya, inkastoo ay jirto cabsi colaadeed oo hareeysay dadka ku nool magaaladaas.
Inta badan dadkii ku noolaa magaalada Gaalkacyo ayaa mudooyinkii dambe isaga barakacay guryahooda ku yaalay halkaas, inkastoo la sheegayo in qaar ka mid ah dadkaasi ay maanta dib ugu laabteen guryahooda.
Dhinaca kale, Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating oo maalintii shalay gaaray magaalada Boosaaso ayaa ku guuleystay inuu heshiis xabad joojin ah kala dhex dhigo labadaasi maamul.
Ilaa iyo haatan lama oga in heshiiskaasi uu dhaqan gelin doonno iyo inkale, inkastoo la sheegayo in saraakiisha ciidamada labada maamul ee Puntland iyo Galmudug ay waxyar kala durjiyeen ciidamada maalmihii ugu dambeysay isku hor fadhiyay goobihii ay ku dagaalameen.
Dhinaca kale, maalinta Jimcaha ayaa lagu wadaa in magaalada Gaalkacyo ay isugu yimaadaan madaxda Soomaaliya, si looga sii amba-qaado heshiisyadii hore ay labadaasi maamul ka gaareen colaadaha iyo dagaalada ka jira magaaladaas.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa mudooyinkii ugu dambeysay baaqyo isdaba-joog ah ay kasoo baxayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, kuwa beesha caalamka iyo waxgaradka gobolka Mudug, kuwaas oo ku baaqayay in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu joojiyo dagaalada iyo colaadaha ka jira magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.